धनी बन्न मुकेश अम्बानीले प्रयोग गर्ने सुत्रहरु ! – News Nepali Dainik
भर्खरै आयो दुखद खबर-सीसीएमसीको बैठक बस्दै, पुन लकडाउन हुने पक्का
फेरि अर्को दुई जनामा कोभिडको ओम्रिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि, सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान गरिदै
खुसिको खबर:अब नेपालमा सुरुभयो ४५ वर्षबाट बृद्धभत्ता(सहि वा गलत?)
धनी बन्न मुकेश अम्बानीले प्रयोग गर्ने सुत्रहरु !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: २०:४२:२९
मुकेश अम्बानीले बिरासतमा सम्पत्ति पाएका थिए भन्ने भ्रम धेरैमा पाइन्छ । तर, उनले आफ्ना पिता धीरुभाई अम्बानीबाट सफलताको मुलमन्त्र मात्रै पाएका थिए । धीरुभाई अम्बानीले आफ्ना दुई छोराहरु मुकेश र अनिलसँगै आफ्नो सपना पूरा गरेका थिए ।
जब धीरुभाई अम्बानी गुजराजबाट मुम्बई आएका थिए । त्यतिबेला उनले ५०० मात्र साथमा ल्याएका थिए । तर, कडा मेहेनत र लगनशीलताले गर्दा उनले छुट्टै एम्पाएर खडा गरे । जसलाई संसारमै एक सफल व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छ ।
संसारमा पैसा कमाउन र धनी बन्न चाहने सबै हुन्छन् । तर केही व्यक्तिले मात्रै आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छन् । भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी पनि त्यस्ता थोरै व्यक्तिमा पर्छन् । बाबुले कमाएको धनलाई उनले आफ्नो मेहनत र लगनसिलताका कारण नयाँ उचाई दिए । धन आर्जनमा सफल व्यक्तीहरुको नाम लिदा अग्रपंथीमै आउछ ।
आखिर उनी कसरी धनी भए त ?
मुकेश अम्बानी आफ्ना बाबु धिरुभाई अम्बानीलाई आफ्नो गुरु मान्छन् । पैसाको पछाडि दौडिदैमा कोही सफल व्यवसायी बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता धिरुभाई राख्थे । मुकेश यसैमा विश्वास गर्छन् ।
ठूलो व्यवसायी बन्नका लागि ठूलै सपना देख्नु आवश्यक छ । उनी पनि यस्तै गर्छन् । उनी ठूलो सपना मात्रै देख्दैनन् त्यसलाई पूरा नगरेसम्म आरामले निदाउन समेत सक्दैनन् ।
उनी प्राय मिडियाबाट टाढै रहन्छन् किनकी उनलाई लाग्छ जब काम देखिन्छ तब कसैले केही बोल्न आवश्यक हुँदैन । रेभिन्यूले आफैँ बताउँछ ।
उनी व्यवसायमा मात्रै हैन आफ्नो सौखका लागि पनि पर्याप्त खर्च गर्छन् । मानिसले आफ्नो मनले मागेका कुरा पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको टिम मुम्बईका मालिक हुन् ।
कामको कुरा आएपछि मुकेश आफ्नै अनुभवलाई ठूलो मान्छन् । उनले जीवनमा थुप्रै समस्या व्यहोरेका छन् । यसकारण उनी भन्छन्, आफैलाई विश्वास गर र हरेक परिस्थितीका लागि तयार होउ ।
जुवाडे र साहसी व्यक्तिका अनुभव उस्तै हुन सक्छन् । तर यी दुईबीचमा केही फरक छ । मुकेश आफूलाई साहसी व्यक्ति मान्छन् र हरेक चुनौती समाना गर्न तयार हुन्छन् ।
दौडको बीचमा आराम गर्नेहरुलाई सफलता प्राप्त हुँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसैले कसैलाई नपर्खने भएकै कारण सफलताको भोक आफैँमा हुनुपर्ने मुकेशको ठम्याई छ । मुकेश टिमका हरेक व्यक्तिसँग साथमा हुन्छन् र उनी व्यवसायिक व्यक्तिहरुमा भरोसा राख्छन् ।
विजनेशको प्रवद्र्धनका लागि पहिला बजारको माग बुझ्न जरुरी छ । यदी तपाईको उत्पादनभन्दा राम्रो उत्पादन बजारमा छ भने तपाईले आफ्नो क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्छ ।
Last Updated on: March 16th, 2021 at 8:42 pm
सैं पनि एमालेकी गायिका प्रिया भण्डारीले कसिन लगन गाँठो
एक महान प्रेमीका गरीन प्रेमीको लागि यत्रो त्याग | बिहे हुनु ७ दिन बाकी हुदा घट्यो डर’लाग्दो घट’ना(भिडियो)
बिरामी अनिता खड्का भेट्न राजु परियार हस्पिटल पुग्दा धुरुधुरु रो’इन अनिता,छोरी आ’हानाले फकाईन(भिडियो)
घरबाट माइत जान्छु भनेर हिडेकी युवती बाटो बाटै बे’पत्ता,आमाबुबाको रुवावासी छ (भिडियो हेर्नुस्)